Banyere Anyị - Shenzhen Chinaok Electric Appliances Co., Ltd.
E guzobere SASELUX na 2011 ma ọ dị na Shenzhen, China. Ụlọ ọrụ anyị pụrụ iche na ngwaahịa ọkụ ọkụ mberede, gụnyere ihe ọpụpụ, ọkụ mberede, ndị ọkwọ ụgbọ ala mberede, onye na-achọpụta anwụrụ ọkụ wdg. -COC, ISO wdg Ugbu a, ụlọ ọrụ anyị esorola ọtụtụ ndị ahịa ama ama, dịka Beghelli, Eaton na Amazon. Iji kwalite ngwaahịa na ọrụ anyị nke ọma, anyị na -aga Canton Fair, ihe ngosi Frankfurt na Germany na ihe ngosi Hong Kong kwa afọ. Anyị nwere ike nweta ọtụtụ ndị ahịa oge ọ bụla.
"Eziokwu, ntụkwasị obi, Innovation, na itinye aka" dịka ụkpụrụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ anyị enyerela ụlọ ọrụ anyị aka ịzụlite n'ọhịa nke Mkpuchi Mberede ruo ogologo oge wee nweta ụfọdụ nsọpụrụ. Anyị na-agbaso usoro atụmatụ ahịa mgbe niile, na-ebuli ngwaahịa mgbe niile yana melite teknụzụ. Anyị kpebisiri ike ịnye ndị ahịa ezigbo mma, ọnụahịa asọmpi na ọrụ nchebara echiche. Anyị na -enyocha ngwaahịa mgbe niile tupu mbupu. Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla na ngwaahịa a mgbe ị natasịrị, ị nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị ka anyị lelee ya. Ọrụ OEM na ODM bụ ihe kacha mma anyị nwere. Ọ bụrụ na iwu buru oke ibu, anyị nwere ike hazie nkwakọ ngwaahịa na akara ngwaahịa n'efu. Anyị nwekwara nnukwu ụlọ ọrụ nke anyị. Enwere ndị ọrụ 200 n'ụlọ ọrụ anyị. Yabụ na ịkwesighi ichegbu onwe gị maka ịnye ngwaahịa.
Ndị otu ụlọ ọrụ anyị bụ ọkachamara na ndidi. Anyị nwere ike idozi nsogbu nke ndị ahịa nke ọma. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị. Iji mepụta akara kacha mma ma melite ọrụ ahụ, anyị na -anọgide na -abawanye ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ anyị ma na -emeziwanye ikike isi.
Ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị! Nabata ozi ọ bụla!